amin'izao fotoana hanoratana ny vaovao izao dia hita ireo omby miisa 271 ao amin'ny fokontany Ambovolaly ary tazomina mandra-pahatongan'ireo tompon'andraikitry ny Dinabe mba hanara-maso ny fahamarinan'ny omby efa manana boky mazava tsara. Ankoatra ireo olom-boafidy, mampikolay ny mponina ihany koa ireo olom-boatendry.
Tsy vao izao akory no nahitana ity famotsiana omby ity raha ny filazan’ireo mponina matetika, vokatry ny fanadihadiana lalina niarahana tamin’ny UNESCO sy ireo efa tratra hatrizay ny manampahefana tahaka ny delegem-panjakana, ny veterinera sy ny manampahefana hatrany amin’ny fokontany, kaominina, distrika, faritra sasany eto Madagasiakara. Rehefa misava ireo mpitandro filaminana dia taratasin’omby halatra efa voadio no savaina. Ireto farany anefa no mamoy ny ainy mifanehitra amin’ireo dahalo. Ireo omby tafiditra foriera koa matetika lafo ny hofan’ny fanagiazana ary mananosarotra ny zotram-pitsarana ka mampirongatra ny kolikoly.